Otu esi nwetaghachi akaụntụ mpaghara na Windows 10 | Akụkọ akụrụngwa
Otu esi agbanye na akaụntụ mpaghara na Windows 10
Iji Windows 10 anyị nwere ike ịbanye na akaụntụ Microsoft iji jiri ụfọdụ atụmatụ dị oke mkpa dị ka mmekọrịta dị n'etiti ngwaọrụ. Ma olee otú ọ bụghị onye ọ bụla nwere mmasị jikọtara akaụntụ gị na kọmputa gị na otu nke Microsoft, ikekwe iji chekwaa obere nzuzo dị ka anyị na-ekwu okwu na post a na nso nso a, ọ nwere ike ime na anyị chọrọ inwe akaụntụ mpaghara dịka anyị na-enwe na mbipụta ndị gara aga nke Windows, dị ka nsụgharị 7.
Ọzọ anyị ga-egosi gị otu gaa na akaụntụ mpaghara na Windows 10 site na ihe ọ ga - abụ ịnwe onye na - arụ ọrụ na Microsoft. Zọ ole na ole dị mfe tinyere iji akara iji weghachite akaụntụ mpaghara.
Otu esi agaghachi na akaụntụ mpaghara na Windows 10
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ gaa na ntọala site na mbido
Na nhazi anyị na-achọ "Akaụntụ"
N'ihu anyị, anyị nwere ọrụ bụ isi "Akaụntụ gị" ebe anyị nwere ozi nke onye ọ bụla anyị kere. Anyị na-agakwuru onye nchịkwa ma họrọ nhọrọ ahụ "Banye na akaụntụ mpaghara kama"
Ugbu a windo mmapụta na-egosi na-acha anụnụ anụnụ nke na-amanye anyị tinye okwuntughe Akaụntụ Microsoft. Anyị na-ewebata ya
Ihe na-esonụ bụ ihe niile ozi akaụntụ mpaghara. Anyị na-etinye aha njirimara, paswọọdụ na ngosi
Ihe ozo bu nye ya ikike iji Windows pụọ ma malitegharịa ya na akaụntụ ọhụrụ. Cheta idobe ihe niile nke ọma tupu ịme usoro a.
Nzọụkwụ ikpeazụ ị ga - eme, dị ka nhọrọ, bụ hichapụ na "Akaụntụ Gị" Microsoft bụ na ị ga-ahụ na ala nke mpio ahụ n'okpuru "Akaụntụ ndị ọzọ ị na-eji."
Anyị nwere akaụntụ mpaghara dị njikere na Windows 10 na-enweghị -akwado a Microsoft. Otu n'ime ohere ndị anyị nwere na Windows na nke na-eme ka anyị laghachi n'ihe dị mgbe niile na mbipụta ndị gara aga nke Windows dịka XP ma ọ bụ 7.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Otu esi agbanye na akaụntụ mpaghara na Windows 10
Nnọọ. Say sị na anyị debere ozi ahụ nke ọma. Yabụ, onye ọrụ agbanweghị na ọ bụ ya? A na-emepụta akaụntụ ọhụrụ ma m ga-ebufe faịlụ niile na ndị ọzọ site na otu akaụntụ gaa na ọzọ? Aghọtachaghị m ya nke ọma.
Achọrọ m ibido na-enweghị paswọọdụ, ọ bụ nke a bụ nhọrọ kacha mma?
Ọ dịghị Laura na-agbanwe akaụntụ ma ọ bụ aha na-egosi kama faịlụ niile dị ebe ha nọ
Zaghachi Alexander Espinel
Anaghị m agbakwunye cueta mgbe m gbanye kọmputa maka oge mbụ, ugbu a achọrọ m ịgbakwunye ya, ana m eme usoro ndị ahụ, ọ na-ebu ibu mana ọ nweghị ihe m na-eme na-apụta
Zaghachi Angye Jimenez
Ndewo, agbanwere m akaụntụ mpaghara mana m rapaara na usoro ịpụ apụ. Agbalịrị m imecha ya site na ịgbanyụ kọmputa ahụ ozugbo, mana mgbe m malitere, ọ na-eweghachi m na ihuenyo m na-egbu osisi. Aro ọ bụla iji zọpụta m na ajọ ihe nke Windows. Daalụ
Ngwa 5 dị mkpa maka ịlaghachi ụlọ akwụkwọ
3 antivirus free nke ị gaghị echefu maka Windows 10 gị